बधाइ छ ! नेपाली चेलीलाइ - Muldhar Post
बधाइ छ ! नेपाली चेलीलाइ
मूलधारपोष्ट २०७६, १७ मंसिर मंगलवार 170 पटक हेरिएको
काठमाडाैं । खेलकुदको महाकुम्भ नेपालमा भइरहेको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपालले सानदार सुरुवात गरेकाे छ । नेपालले स्वर्णकाे वर्षा नै गरेकाे छ । यसै क्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को कभर्ड हल त्रिपुरेश्वरमा बिशेष महत्वका साथ हेरिएको साग महिला भलिबलको फाइनलमा भारतसंग पराजित भएको नेपालले रजतमा चित्त बुझाएको छ ।
फाइनलमा पराजित भएपनि नेपाली महिला भलिवल टिमले पाएको यो एतिहासिक सफलता हो । नेपाल भारतसंग ३/२ को सेटमा पराजित भएको थियो । भारतले सागमा ‘महिला भलिबल’ विधा समावेश भएदेखि नै स्वर्ण जित्दै आएको थियाे । सधैँ भारतको छाँयामा पर्ने गरेको नेपालले भने कास्यमा मात्रै चित्त बुझाउनु परेको सागको इतिहास छ । यसपटककाे फाइनलमा पुगेको नेपाली टाेलीलाई रजत एतिहासिक सफलता मिलेकाे हाे ।
सागको १३ औं श्रृंखलाको फाइनल आइपुग्न भारतले शनिबार सेमिफाइनमा माल्दिभ्सलाई ३-० को सोझो सेटमै पराजित गरेको थियो । उसले पहिलो सेटमा २५-१४, दोस्रो सेटमा २५-६ र तेस्रो सेटमा २५-१७ ले माल्दिभ्सलाई पराजित गर्दै सहज जीत निकालेको थियो ।
यता नेपालले पनि गत शनिबार नै भएको सेमिफाइनलमा श्रीलंकालाई ३-० को सोझो सेटमै पराजित गरेर फाईनलको यात्रा तय गरेको थियो । श्रीलंकामाथिको जीतमा नेपालले पहिलो सेटमा २५-१४, दोस्रो सेटमा २५-१८ र अन्तिम सेटमा २५-२१ को जित निकाल्न सफल भएको थियो । यसअघि नेपालले साग महिला भलिबलमा सन् १९९९, २००६ र २०१६ मा कास्यमै चित्त बुझाउनु परेको थियो ।